पुस्तक-जन्मेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki Encumbrance
पुस्तक ग्राउण्ड गल्ती के हो?
शब्द Encumbrance तपाईं रुचाउनुहुनेछ यदि तपाईं रियल एस्टेट वा बंधक वित्त पोषणमा रुचि राख्नुहुन्छ। यो आधारभूत ऋण विशेष गरी जिल्ला रजिस्टरमा जिल्ला दर्तामा प्रवेश गरिएको छ, जुन ऋण ऋण प्रमाणित गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि यो बंधक ऋणको सम्बन्धमा यो अवधारणा संग के गर्नु पर्छ। यदि तपाईं प्रोजेक्टको निर्माण वा खरीदको लागि परियोजना योजना बनाइरहनुभएको छ र तपाईसँग यो किन्नको लागि पर्याप्त पैसा छैन भने, तपाईं पनि ऋण वा तुलनीय ऋणको माध्यमबाट वित्तपोषण हेर्न सक्षम हुनेछन्। यस ऋणलाई सुरक्षित गर्न बैंकले भूमि रजिष्ट्रेसन प्रविष्टिमा तेस्रो दर्ता दर्ताको लागी ऋणको रकमको आधारमा भूमि शीर्षक ऋण प्रविष्ट गर्नेछ।
सुरक्षा शब्द "बंधक" संग जोडिएको छ।
तिनीहरू आफैलाई सजग हुनेछन् कि सुरक्षा र विश्वसनीयताको अवधारणा क्रेडिट र ऋणसँग नजिक छ। सुरक्षाको लागी, बैंकले आफ्नो ऋण खरिद गर्दछ जुन यो भूमि रजिस्टरमा सम्पत्ति खरीद गर्न वा निर्माण गर्दा अनुदान दिन्छ। अन्य ऋणहरू पनि यहाँ प्रवेश गर्न सकिन्छ र ऋण को रकम क्रेडिट सीमाको अधीनमा छ। तपाईलाई थाहा छ कि बैंकसँग पुस्तक-उधार लिने सम्पत्तिको मानको 80% को सीमा शुल्क हुन्छ। तिनीहरू आफैले यो प्रविष्टि गर्न सक्छन्, बैंक यति गर्न सक्छ, र बैंकहरूले पनि अन्य ऋणहरू मार्क्सको माध्यमबाट सुरक्षित गर्न सक्छन्। न केवल बैंकहरू आफ्नो ऋण र ऋण सुरक्षित, तर पनि दर्ता दर्तामा पुस्तक बंधक पनि अन्य दावीको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ, जुन जरूरी ऋण छैन। उदाहरणका लागि, एक विरासत को मामला मा या एक हिरोइन समुदाय को गठन मा, ग्राउंड को ऋण सामान्यतया एक सम्पत्ति को भूमि दर्ता मा प्रवेश गरियो। केवल अधिकृत व्यक्तिहरू जो सम्पत्तिमा रुचि राख्छन् वा जो ऋणको सम्बन्धमा छन् आधारभूत बंधकको निरीक्षण गर्न सक्छन्।
पुस्तक ग्राउन्ड कर्जाको वास्तविक दर्ता
भूमि वा भवनमा भूमि रजिस्टरमा प्रविष्टिहरू सबैद्वारा सजिलै बनाइएन। वास्तविक दर्ता भूमि रजिस्ट्री द्वारा बनाईएको छ, जो एक सक्षम जिल्ला जिल्ला अदालत मा स्थित छ। सम्पत्ति वा सम्पत्ति सधैं अदालतको जिल्लामा राखिएको छ र यहाँ प्रत्येक भूमि भूमि दर्ता प्रविष्टिको साथ रेकर्ड गरिएको छ। त्यहाँ कुनै म्यानुअल मैदानहरू छैनन्। थप बुझ्न र व्याख्याको लागि, अझै पनि अवधारणा छ पत्र बंधक, तर यस्तो सम्पत्ति वा भूमि को एक मालिकले ऋणदाता यो अधिक REM दावी cedes जो वास्तविक भूमि शुल्क रूपमा बंधक विभिन्न प्रकार, छन्। भुक्तानीमा विलम्ब र ऋण तिर्न असफलताको घटनामा, उधारकर्ताले पहिले नै सम्पत्ति वा जग्गाको स्वामित्व हासिल गरेको छ। स्थिति, यहाँ ऋण मात्र उल्लेख गरिएको छ पत्र बंधक मा फरक छ, तर यो स्वामित्व को स्थानान्तरण गर्न आउँछन्। आधारभूत पुस्तक कर्जाको प्रविष्टिहरू भुक्तानी गर्न उत्तरदायी छन् र सामान्यतया सम्पत्तिको स्वामीले यी खर्चहरू मान्दछन्। डिजिटाइजेशनको समयमा, आजको पुस्तक उधारिएको दावीहरू डिजिटल रूपमा पनि देख्न सकिन्छ र यी देनदार निर्देशिकाहरू पनि सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य छन्। यो अवधि फेरि बिल्कुल टिप्पणी व्याख्या गर्न, तपाईं वाक्यांश जान्नुपर्छ, क्रेडिट-प्रदान बैंकिङ संस्थाले देखि देशमा शुल्क संग ऋण को पूर्वनिर्धारित विरुद्ध नै रक्षा गर्नेछ। त्यसैले तपाईं विशेषता वा एक ऋण को मद्दतले विशेषता किन्न गर्नुपर्छ, त्यसपछि बैंक भूमि दर्ता प्रविष्ट यी सम्बन्धित देशमा शुल्क छोड्न हुनेछ। तिनीहरूले पनि यस प्रविष्टि को लागत सहन र एक दिन छ भने ऋण फिर्ता भुक्तानी त तपाईं रद्द र बैंकिङ संस्थाले अनुदान तपाईं एक रद्द प्राधिकरण लागि लागू गर्न आवश्यक छ। फेरि, फीसको रूपमा मेटाउने लागत तपाईंलाई आउँछ।
अघिल्लो लेखजमानत मूल्य
अर्को लेखतीन-तरिका वित्त